100 ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားဖြင့် Quotes Investing Read - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
"သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှအကျိုးနေမကောင်း-သင့်လျော်ပါတယ် Master မရပါဘူး WHO ကလူတစ်ဦးချင်းစီ။ " -BENJAMIN ဂရေဟမ်
2 ။ "ရောင်းချစတင်ရန်ဝယ်ယူသို့မဟုတ်လွန်းနေ LOW စတင်ရန်လွန်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြ။ " Jesse LIVERMORE
3 ။ "ထိတ်ခတ်ငွေရှာဖို့ THE KEY ကိုသူတို့အထဲကတွှေ GET သည်မဟုတ်။ " ပတေရု Lynch
4 ။ "စျေးနှုန်းအကြောင်းပြချက်တဲ့အခါတိုးတက်မှု Stock ဝယ်ယူတန်ဖိုးရှိတယ်။ " ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဂရေဟမ်
5 ။ "လည်းအလေးအနက်နှစ်စဉ်ရလဒ်မယူကြဘူး။ အဲဒီအစားလေးငါးနှစ်တစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှအာရုံစိုက်ပါ။ "ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဂရေဟမ်
6 ။ "THREE စကားလုံးတွေအသံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များအနှစ်ချုပ်မှာစိနျချေါနှငျ့ရငျဆိုငျ, WE ဘေးကင်းဆောင်ပုဒ် margin စွ။ " Warren Buffett
7 ။ "အောငျမွငျလူများနှင့်အလွန်အောင်မြင်ပြည်သူများအကြားခြားနားချက်အလွန်အောင်မြင်နီးပါးသမျှသောအရာ '' NO '' ဆို IS ။ " Warren Buffett
8 ။ "စန်းပွ & THE တွေဆီကနေလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အတွင်း STOCK ပြန် Normal နှစ်နောက်ထပ် Swing ပေးခဲ့သည်။ ယောဟနျ BOGLE - အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောင်းပြန်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက် "၏သံစည်းကမ်းချက်
9 ။ "WALL STREET ACTIVITY အား၎င်း၏ပိုက်ဆံ ... သင်မလှုပ်ရှားပေါ်တွင်သင်၏ငွေရှာ '' '- Warren Buffet
10 ။ "တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်သိသာအလားအလာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သိသာအမြတ်အစွန်းသို့ဘာသာပြန်ရန်မ" - ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဂရေဟမ်
11 ။ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေးပါသောအဓိကစတော့ရှယ်ယာထီထိုးကြသည်မဟုတ်သတိရဖို့ IS ။ " - ပတေရု Lynch
12 "မဆို Corporation ရုံး၏သာမန်ထက်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏တံ့သောအကျိုးကိုထောက်မန်နေဂျာရဲ့တွန့်ဆုတ်တိုက်ရိုက်အချိုးကျတိုးလာသည်။ " ပတေရု Lynch
13 ။ "ဒုက္ခကုမ္ပဏီအတွင်းစိတ်ကျရောဂါ STOCK ဝယ်ယူသည့်အခါ, အထကျဘဏ်ဍာရေးအနေအထားနှင့်လျော်မြားကိုရှာနှင့်ဘဏ်များအကြွေးဝန်နဲ့အတူမြားကိုရှောငျပါ" - ပတေရု Lynch
14 ။ "WALL ST FROM မှ THE ဖောင်းပွမဝယ်ပါနဲ့။ စတော့ရှယ်ယာအစဉ်အမြဲသွား & the Press ။ စတော့ရှယ်ယာ NOTHING & အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ သာ. ကောင်း၏ပါတဲ့အခါရှည်လျားကာလရှိပါတယ်။ "-JIM Roger
15 ။ အလွန်ကြီးစွာသောပထမဆုံးတွေ့ကြုံစေ။ အခါသမယ FOR suite UP ။ "-WARREN ဘူဖေး
16 ။ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့တွင်အန္တရာယ်သူတို့သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွင်ကန့်သတ်, အန္တရာယ်နဲ့သူတို့သဘောတူတွေကိုအာရုံစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ " -MICHAEL MAUBOUSSIN
17 ။ "အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာလေးခုပိုပြီးစျေးကြီးစကား '' သူကကွဲပြားခြားနားဒီ TIME က '' ဖြစ်ကြပါတယ်။ " - Sir John Templeton
18 ။ လောကီပညာဆည်းပူးနှငျ့အညီသင့်အပြုအမူ Adjustments ။ အသစ်ရဲ့အပြုအမူထိုအခါသူတို့နှင့်အတူငရဲသို့ ... သင်သင့်ရွယ်တူ GROUP နှင့်အတူအနည်းငယ်ယာယီလူကြိုက်ပေးလိမ့်မည်။ "-CHARLIE Munger
19 ။ သူတို့ကိုသင် Disney -WALT လိုက်သတ္တိရှိပါကအားလုံးသင့်အိပ်မက်တွေဖြစ်လာဖို့နိုင်သလား
20 ။ "သင်စတော့ရှယ်ယာလွန်းပေးရန်လျှင်အရငျးကွီးကိုကြီးစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါဘူး။ " -BENJAMIN ဂရေဟမ်
21 ။ "အကြောင်းပြချက်ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်လုံ့လဝီရိယ PERSON သည်တိကျမှုအသုံးဝင်တဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်စီရင်တော်မူနိုင်မည်။ " -BENJAMIN ဂရေဟမ်
22 ။ "အောငျမွငျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတခွားသူ၏မျှော်လင့်ထားချက်အရဖြစ်၏။ " ယောဟန် MAYNARD Keynes
23 ။ "အများဆုံးအဆိုးမြင်၏အချိန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကောငျးဆုံးအခြိနျ IS နှင့်အမြင့်ဆုံးတာတော့၏အချိန်ရောင်းချမည်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ " ယောဟန် Templeton
24 ။ "ငါ့ကိုယ်ပိုင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ AS အတွေ့အကြုံ-နှစ်ဦးစလုံးနှစ် PAST- တှငျကြှမျးကငျြ WITNESS အပေါ်အခြေခံတဲ့ရှားပါး့ COUNT လေး variable ထက်ပိုသုံးကြဘူး။ အခြားအရာအားလုံးဆူညံသံ IS ။ "-MARTIN Whitman
25 ။ "အောငျမွငျ TRADING အမြဲတမ်းမှန်းဆ, မထောက်လှမ်းရေးစစ်တိုက်ခြင်းငှါစိတ်လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်။ သူဟာအကြီးမားဆုံးရန်သူစိတျလှုပျရှားမှု "-JESSE LIVERMORE ကွောငျး
26 ။ -WARREN ဘူဖေး "စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးရွေးကောက်ပွဲများကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားနေရပ်ရန်"
27 ။ "အမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းများသူတို့လိုချင်သော OR လိုအပ်ဖြစ်ပျက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရရှိမှုနှင့်မတဲ့အခါမှသာ Safe ဖွဲ့နိုင်ပါသည်။ " -GERALD M က LOEB
28 ။ "သင် Win နိုင်ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းလေ့လာရန်စတင်ငှကွေးဆုံးရှုံးနိုင်ရန်အတွက်မပြုအရာကိုသိတဲ့အခါ။ " -JESSE LIVERMORE
29 ။ "သင်မပိုင်ဆိုင်လိုကွောငျ့စတော့ရှယ်ယာ UP သွားချင်ကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးကိုဝယ်ကြလော့။ " -WARREN Buffett
30 ။ "လောင်းကစားလုပ်တဲ့မ။ အိုင်တီရောင်းချမည်ထို့နောက်အားလုံးသင့်ကိုကယ်တင်ယူကောငျးအခြို့ STOCK ဝယ်အိုင်တီတက်တိုင်အောင်ကိုင်ထားပါ။ အိုင်တီတက်သွားမပါဘူးဆိုရင်, အိုင်တီမဝယ်ပါနဲ့။ "-WILL Roger
31 ။ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးနှင့်စိတ်ပညာဆုံ IS ။ " -SETH KLARMAN
32 ။ "NO အမည်ခံအောငျမွငျထင်ကြေးထက်ပိုမိုခက်ခဲသောအလုပ်, ထောက်လှမ်းရေး, စိတျရှညျနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်စည်းကမ်းလိုအပ်သည်။ " -ROBERT RHEA
33 ။ "နွားကိုစျေးကွက်တာတော့ ON သံသယရှိ, ရင့်ကျက်တွင်ပေါက်, အဆိုးမြင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး, Euphoria ပီတိတွင်သေနေကြတယ်။ " -SIR ယောဟန် Templeton
34 ။ "ငါတို့လွယ်ကူရှင်းလင်းအရာတွေက FOR တစ်ဦးကစိတ်အားထက်သန်မှုရှိကြပါတယ်။ " -CHARLIE Munger
35 ။ "အဘယ်အလုပ်ကိုမျှမပြုလျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Fun, ထွက်ပေါက်, နှင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ " -PETER Lynch
36 ။ "အတိတ်ကာလကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို, ထပ်ဖြစ်သွားမည်, တဖန်, တဖန်! -JESSE LIVERMORE
37 ။ "အောငျမွငျလူများနှင့်အလွန်အောင်မြင်ပြည်သူများအကြားခြားနားချက်အလွန်အောင်မြင်နီးပါးသမျှသောအရာ '' NO '' ဆို IS ။ " Warren Buffet
38 ။ "စျေးကွက်သင် solvent နနေိုငျထက်ပိုရှည်အဓိပ်ပါယျမရှိသောနနေိုငျ။ "ယောဟန် MAYNARD Keynes
39 ။ "WALL STREET ACTIVITY အား၎င်း၏ပိုက်ဆံ ... သင်မလှုပ်ရှားပေါ်တွင်သင်၏ငွေရှာ '' '- Warren Buffet
40 ။ "တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်သိသာအလားအလာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သိသာအမြတ်အစွန်းသို့ဘာသာပြန်ရန်မ" - ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားဂရေဟမ်
41 ။ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေးပါသောအဓိကစတော့ရှယ်ယာထီထိုးကြသည်မဟုတ်သတိရဖို့ IS ။ " - ပတေရု Lynch
42 ။ "ဒုက္ခကုမ္ပဏီအတွင်းစိတ်ကျရောဂါ STOCK ဝယ်ယူသည့်အခါ, အထကျဘဏ်ဍာရေးအနေအထားနှင့်လျော်မြားကိုရှာနှင့်ဘဏ်များအကြွေးဝန်နဲ့အတူမြားကိုရှောငျပါ" - ပတေရု Lynch
43 ။ "WALL ST FROM မှ THE ဖောင်းပွမဝယ်ပါနဲ့။ စတော့ရှယ်ယာအစဉ်အမြဲသွား & the Press ။ စတော့ရှယ်ယာ NOTHING & အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ သာ. ကောင်း၏ပါတဲ့အခါရှည်လျားကာလရှိပါတယ်။ "-JIM Roger
44 ။ "နေသမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးက STOCK RIGHT ညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်နဲ့စျေးကွက်မှန်သည်, အမြတ်အစွန်းယူအလျင် BE မ။ " -JESSE LIVERMORE
45 ။ "အပျော်ရွှင်ဆုံးလူတွေလို '' အကောင်းဆုံး '' အရာမရှိဘူး။ များသောအားဖြင့်သူတို့ဖူးသောအရာတို့ကိုတန်ဖိုးထား။ "- Warren Buffet
46 ။ "မဆိုတာဘာလဲဖျက်သိမ်းရန်, အသုံးဝင်သောဆိုတာဘာလဲကိုစုပ်ယူ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထူးခြားတဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင် IS ။ " -BRUCE လီ
47 ။ "WALL STREET တစ်ဦးက Rolls Royce ရှိလူများစီးမြေအောက်ရထားသောသူတစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်များရယူခြင်းသောတစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ " -WARREN ဘူဖေး
48 ။ "THE B ကိုIG ငွေဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း IN ပေမယ့်ချောင်းမြောင်းမရှိ။ "-CHARLIE Munger
49 ။ "ကုန်သည်ထင်မြင်ချက်မရှိရှိသင့်သည်။ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို, ပိုခက်လေအိုင်တီတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးရာထူးရ IS ခိုင်မာ။ "-PAUL ROTTER
50 ။ "စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်သိသာဘယ်တော့မှ IS ။ အိုင်တီ, ကလူအများစုဟာမိုက်သောသူအချိန်အများစုမှာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ "-JESSE LIVERMORE
51 ။ "သင်သာဤမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့သည်လည်းအရာများစွာကိုမှားမညာသင့်ဘဝမှာတစ်ဦးကအလွန်နည်းပါးရာလုပ်ဖို့ရှိသည်။ " -WARREN ဘူဖေး
52 ။ "WHEN တွင်သင်သည်တတ်နိုင်သင်ဖို့အခါ, မရ။ " -JESSE LIVERMORE
53 ။ "မိမိတို့အဘို့ငွေရှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု WHO ကလူတွေ; သူတို့ရဲ့ပွဲစားတွေအတွက်ငွေရှာမှနျး WHO ကလူတွေ။ "-BENJAMIN ဂရေဟမ်
54 ။ "သစ် NOTHING Wall Street မှာရှိပါတယ်။ " - Jesse LIVERMORE
55 ။ "မညီမျှမှု၏အဆိုးရွားဆုံးပုံစံမတူညီသောအရာနဲ့ညီမျှအောင်ကြိုးစားရန် IS" -ARISTOTLE
56 ။ "ကုန်သွယ်မှုဖိစီးတစ်ခုခုမှားယွင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ " -JACK SCHWAGER
57 ။ "လူတွေအလွန်အကျွံတွက်ချက်လွန်းနည်းနည်းထင်ပါတယ်။ " -CHARLIE Munger
58 ။ "သင်ခံစားရတဲ့အခါ LIKE အတော်လေးသင်စတင်ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားပါ။ "
59 ။ "သင့် Premium BRAND ဒီထက်ကောင်းတဲ့အထူးတစ်ခုခုပို့ရ, OR အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသွားမယ့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ " -WARREN ဘူဖေး
60 ။ "ငါတို့သူတစ်ပါးဆီအလွယ်တကူလောဘကွီးတဲ့အခါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် BE ရန်အခြားကြောက်တတ်တဲ့အခါမှသာလောဘကြီး BE ကြိုးစားကြပါတယ်။ " -WARREN ဘူဖေး
61 ။ "ကိုယ့်ထိုင်ကာ, စားဖို့, နေ့တိုင်းနီးပါး, လာက်သုံးစွဲအချိန်အများကြီးတောင်းဆို။ အမေရိကန်စီးပွားရေးမှာသိပ်ကိုဆန်း IS ။ "- Warren Buffet
62 ။ "ငါသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ထင်ပါတယ်။ SO, ငါနောက်ထပ်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ထင်ပါသလားနှင့်စီးပွားရေးလူအများစုထက်လျော့နည်း Impulse ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ ကျွန်မဘဝကိုဒီလိုမျိုးသဘောကျကြတယ်ဆိုတော့အိုင်တီပါဘူး။ "-WARREN ဘူဖေး
63 ။ "တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဟုတ်ပါတစ်ဦးကထင်ကြေးအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတသမတ်တည်းအက်ဥပဒေသင့်တယ်။ " -BENJAMIN ဂရေဟမ်
64 ။ "တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလေ့လာသင်ယူစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်ဘဝကိုထစောင့်ရှောက်မည်သင့်တယ်။ " -CHARLIE Munger
65 ။ "အိုင်တီ ONE မျှသာ Master နှင့်တသမတ်တည်းအားလုံးသိသာအလွယ်တကူသိရှိခဲ့တာအခြေခံမူကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုင်ရနိုင်သလားဘယ်လောက်ပိုင်နက်ကြည့်ဖို့ ME အလွန်အံ့သြစေအံ့ဘယ်တော့မှ။ " -CHARLIE Munger
66 ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Entertainment အကယ်. သင်ပျော်စရာရှိခြင်းဆိုရင် ", သင်ဖြစ်နိုင်မဆိုငွေရှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု "ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ IS ။ - George Soros
67 ။ "ဘဝမှာငါစနစ်တကျ MY 40 $ စက်ခွေးလေး-EARED ဒြပ်ပေါင်းများကိုစိတ်ဝင်စားမှု TABLE ဖြည့်စွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သောမေးခွန်းတွေအများကြီးမရှိပါ။ " - Charlie Munger
68 ။ "ငွေ LARGE အန္တရာယ်များယူခြင်းအားဖြင့် LARGE အမြတ် GET ကြိုးပမ်း BY ရှေးရိုးစွဲ TRADING မယ့်အစား BY ဖန်ဆင်းထားသည်။ " DOW -CHARLES
69 ။ -ALEXANDER ELD "စျေးကွက် TRADING မွဲဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရလဒ်များ။ လွှတ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုက"
70 ။ "သင်ပိုင်ဆိုင်အရာကိုသိသင်ပိုင်ဆိုင်ဘာကြောင့်လဲသိ။ " -PETER Lynch
71 ။ "TIME သင်၏မိတ်ဆွေများ IS; Impulse သင်၏ရန်သူတို့ကို IS ။ "ယောဟန် BOGLE
72 ။ "ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံး STOCK သင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ " -PETER Lynch
73 ။ "အခါရှေးခယျြဖို့အတင်းအကျပ်။ ငါအပိုအမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ပင်ကြင်ဖော်မဲ့ညရဲ့အိပ်စက်ခြင်း Trading မဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ "-WARREN Buffett
74 ။ "သင်အသစ်သောအရာစမ်းကြည့်ပါ AS ။ အချို့ကိုသင်အောင်မြင်မှုနှင့်သင်ပါလိမ့်မယ်ပျက်ကွက်တွေအများကြီးရှိသည်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ စိတျဓာတျမရကြဘူး! "ယောဟန် Maxwell
75 ။ အိုင်တီသငျ့စိတျ့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ "ဟု Extreme intensive အယူဝါဒကိုရှောငျပါ။ "-CHARLIE Munger
76 ။ "ငါသည်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ်ငွေရှာဖို့ကြိုးစားမှုဘယ်တော့မှ။ ငါသူတို့ငါးနှစ်ကြာအိုင်တီပြန်ဖွင့်နောက်နေ့စျေးကွက်ပိတ်မယူဆချက်အပေါ်ဝယ်။ "- Warren Buffet
77 ။ "သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရဲ့အစွန်း KNOW WHO ကလူတွေ SAFE ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မယုံကြည်သူတို့, ကြသည်မဟုတ်။ " -WARREN ဘူဖေး
78 ။ "SO အခြားလူများသင် TRUS79T ဘဝကိုကိုယ်အပြုအမူ။ သင်ခိုလှုံခွင့်နေတယ်ဆိုရင်အိုင်တီ ပို. ပင်ယျ။ "-WARREN ဘူဖေး
79 ။ "အကိုဝယ်လျှင်သင်မကြာမီသင်လိုအပ်ရာရောင်းချမည်ရပါလိမ့်မယ်, မလိုအပ်ပါဘူး။ " -WARREN ဘူဖေး
80 ။ "အိုင်တီသင့်ထက်ကောင်းလူတို့နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားက သာ. ကောင်းသည်။ အဘယ်သူ၏အပြုအမူသောလမ်းညွှန်များ၌သင်တို့၏ & သင်ပါလိမ့်မယ်ပျံ့ထက် သာ. ကောင်း၏ Associates ရွေးထုတ်။ "- Warren Buffet
81 ။ "သင်သေသည်တိုင်အောင်အသင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, အိပ်မှာငွေရှာနည်းလမ်းရှာမထားဘူးဆိုရင်။ " -WARREN ဘူဖေး
82 ။ "စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တစ်ခု NO-ကိုခေါ်-Strike GAME IS ။ " -WARREN ဘူဖေး
83 ။ -WARREN ဘူဖေး "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 160 အိုင်ကျူအတူ GUY ကောင်လေး 130 အိုင်ကျူ Beats နေရာ။ တစ်ဦးက GAME မဟုတ်ပါဘူး"
84 ။ "တစ်ခုတည်းသောစျေးကွက် 10 နှစ်ပေါင်းပိတ်ပစ် IF YOU ကျင်းပရန်ဿုံ HAPPY BE င့်ဝယ်။ " -WARREN ဘူဖေး
85 ။ "သင်ပျင်းရိနေခြင်းနှင့်စိတ်မချရနေတယ်ဆိုရင်, အိုင်တီသင်ကို AT ကောင်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအရေးမပါဘူး။ " -CHARLIE Munger
86 ။ "ငါသည် AN Idiots သူတို့ကို Run နိုင်အောင်အရမ်းကောင်းပါတယ်သောလုပ်ငန်း STOCK ဝယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ , တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် LETTER တစျယောကျပါလိမ့်မယ်။ -WARREN ဘူဖေး "
87 ။ "ကျနော်တို့က 'WE နိုးလာတဲ့အခါ BED အနည်းငယ် သာ. ပညာရှိပါသည်ထက်သှားဖို့ဒီမှာ Re ။ " -WARREN ဘူဖေး
88 ။ "အိုင်တီအိုင်တီပျက်စီးခြင်းတစ်ဦးကဂုဏ်သတင်းနှင့်ငါးမိနစ်ညျဆောကျရနျ 20 နှစ်အချိန်ပေးရသည်။ သင်စဉ်းစားလျှင်သင်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုတို့ကိုပြုပါလိမ့်မယ်။ -WARREN ဘူဖေး "
89 ။ တစ်စုံတစ်ဦးကကြာပြီတစ်ပင်ကိုစိုက်သောကွောငျ့ "တစုံတယောက်ကဒီနေ့အရိပ်၌ထိုင်လျက်။ -WARREN ဘူဖေး "
90 ။ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကောင်းစွာပါဘူးဆိုရင်, စတော့ရှယ်ယာနောက်ဆုံးမှာအောက်ပါအတိုင်း။ " -WARREN ဘူဖေး
91 ။ "သင်ရုံတနေ့လုံး ticker တိပ်ကို AT ပြူးကြည့်ရင်ဘာကပိုက်ဆံချမ်းသာတာထက်သဘော'S?" -WARREN ဘူဖေး
92 ။ "စှာအောငျမွငျတွင်တက်ကြွစွာမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။ ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမြဲတစေဝယ်ယူရောင်းချလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိအောင်လို့မရပါဘူး။ -WARREN ဘူဖေး "
93 ။ "လွယ်ကူရှင်းလင်းအပြုအမူထက် Business School ဆုခမြခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုအမူနောက်ထပ်, ဒါပေမဲ့လွယ်ကူရှင်းလင်းအပြုအမူပိုထိရောက်တယ်။ " -WARREN ဘူဖေး
94 ။ "အောင်မြင်မှု SMALL အားထုတ်မှုများပေါင်းလဒ် IS, နေ့ရက်ကာလ၌ & နေ့ OUT ထပ်ခါတလဲလဲ။ " -r COLIER
95 ။ "လူတွေငှားရမ်း, သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသင့်ရငျခှငျ၌တစ်ဦးကပင့်ကူကျဆင်းနေ BY OFF စိုက်ကြည့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လို့မရပါဘူး။ " -CHARLIE Munger
96 ။ "ကျွန်မကြိုးစားခဲ့ WHO ကယောက်ျားတစ်ယောက် AS အောက်မေ့ရချင်ပါတယ်။ " -PAUL Newman
97 ။ "အိုင်တီသင်စညျးစိမျကိုသင့်လစာမဟုတ်ပါဘူး။ အိုင်တီသင့်အသုံးစရိတ်ကျင့်။ "-CHARLES တစ်ဦးက JAFFE
98 ။ "သင့်ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွက်ရှိကြပါတယ်။ သင်အခြားသတင်းများကလူတတ်လွယ်ခြင်းရှိသည်နှင့်သင်ကြဘူးနေရာဂိမ်းကစားလျှင်သင်ဆုံးရှုံးသွားကြသည်။ "-CHARLIE Munger
99 ။ သင်အမြဲဘာကြောင့်လဲ, သူတို့ကဒီထက်ကောင်းတဲ့နားလည်ပါလိမ့်မယ်လူတွေပြောပြ IF "သူတို့ကပိုအရေးကွီးစဉျးစားပါလိမျ့။ ထိုသူတို့ကလိုက်လျောဖို့ပိုပါလိမ့်မယ်။ "-CHARLIE Munger
100 ။ "ကျွန်ုပ်တို့၏ GAME AB အသိအမှတ်ပြုရန် ISIG IDEA ONE မကြာခဏလျှောက်ရှိမလာပါဘူးတဲ့အခါအိုင်တီ, တစ်လျှောက်တွင်ကြွလာသောအခါ။ အခွင့်အလမ်းများပြင်ဆင်မှု MIND မှထံသို့မရောက်ရ။ "-CHARLIE Munger
Tags: အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကိုးကား, Buffett ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအပေါ်ကိုးကား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုးကား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကြောင်းကိုကိုးကား, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအပေါ်ကိုးကား, ကိုးကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံစတော့ရှယ်ယာ, Warren Buffett ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကိုးကား, Warren Buffett ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအပေါ်ကိုးကား